China High Quality Electric Prefabricated Substation Substation Substation N'ogbe-shengte ndị na-emepụta na ndị na-ebubata ngwaahịa |Shengte
Ọdịmma Eletriki etinyegoro n'ime ihe ntinye ihe nrụnye n'ogbe-shengte
Ebe etinyere mbụ (nke a makwaara dị ka ihe ntụgharị igbe European), n'usoro GB/T17467-1998 na ụkpụrụ IEC1330, nrụnye na-agbanwe agbanwe na dabara adaba, mfu dị ala, mkpọtụ dị ala, obere sekit na nguzogide ibufe.
Ọ dabara maka ebe azụmahịa, mpaghara obibi, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na nke Ngwuputa, ụlọ ọgwụ, ụlọ akwụkwọ, ọdụ ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ mmiri, ọdụ ụgbọ mmiri, ụzọ ụgbọ oloko na ebe ndị ọzọ.YBM na YBP bụ ụdị nhazi abụọ.
Nhazi ọdụ ụgbọ ala bụ nhazi "anya" ma ọ bụ "ngwaahịa".
The shei ihe onwunwe nke ngwaahịa bụ aluminum alloy efere, igwe anaghị agba nchara efere, mejupụtara efere, iko fiber mesikwuru simenti efere, wdg
The substation isi mere nke galvanized ọwa ígwè ma ọ bụ ciment na ike corrosion eguzogide na zuru ezu n'ibu ike.
Ihe mkpuchi dị n'elu nke igbe ahụ na-anabata usoro okpukpu abụọ, nke nwere ezigbo mkpuchi okpomọkụ, nchebe radieshon na mmetụta ventilashion.
Agba nke igbe ahụ na-agbanwe ma nwee ike ịhazi ya na gburugburu gburugburu.
Ebe a na-arụ ọrụ nke ọma (nke a makwaara dị ka mgbanwe igbe Europe), kwekọrọ na ọkọlọtọ GB/T17467-1998 na ọkọlọtọ IEC1330, nrụnye na-agbanwe agbanwe, obere mfu, obere mkpọtụ, ike na-eguzogide obere sekit na ibu ibu.Ọdabara maka ebe azụmahịa, ebe obibi, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ebe a na-egwupụta akụ, ụlọ ọgwụ, ụlọ akwụkwọ, ọdụ ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ mmiri, ọdụ ụgbọ mmiri, ụzọ ụgbọ oloko na ebe ndị ọzọ.Enwere nhazi abụọ: mkpụrụokwu font (YBM) na ụdị mkpụrụedemede (YBP).
· Elu: ≤ 1000m;
· Ọsọ ifufe: ≤ 34m/S (ọ bụghị karịa 700pa);
· Ambient okpomọkụ: kacha okpomọkụ +40 ℃ , kacha nta okpomọkụ -35 ℃;
· iru mmiri dị ala: nkezi kwa ụbọchị abụghị ihe karịrị 95%, na nkezi kwa ọnwa abụghị ihe karịrị 95%;
Ihe mkpuchi na-awụ akpata oyi n'ahụ: osooso kwụ ọtọ abụghị ihe karịrị 0.4m / s2,The vetikal osooso bụghị karịa 0.15mm / s2;
· Mmasị saịtị nwụnye: ọ dịghị ihe karịrị 3 Celsius;
Ebe nwụnye: Awụnyere n'ebe ọkụ na-adịghị, ihe egwu mgbawa, mmetọ dị njọ, corrosion kemịkalụ na oke ịma jijiji.
· Ọ bụrụ na ị gafere ọnọdụ ndị dị n'elu, ị nwere ike ịkparịta ụka na ụlọ ọrụ ahụ.
· Obere size, kọmpat Ọdịdị na mfe ịwụnye.
ÀMMADỤ NKE EKPERE:
A. The substation Ọdịdị na-ahaziri na udi nke "ntupu" ma ọ bụ "ngwaahịa".
B. Ihe eji eme ihe na-emepụta ihe bụ nke aluminom alloy efere, igwe anaghị agba nchara, efere mejupụtara, iko fiber mesikwuru simenti osisi, na ihe ndị yiri ya.
C. The isi nke substation mere nke galvanized ọwa ígwè ma ọ bụ ciment, nke nwere ike corrosion eguzogide na zuru ezu n'ibu ike.
D. N'elu mkpuchi nke kabinet na-anabata usoro okpukpu abụọ, nke nwere ezigbo mkpuchi okpomọkụ, radieshon na mmetụta ventilashion.
E. A na-ekewa ọnụ ụlọ ọ bụla nke ọdụ ụgbọ mmiri site na ụlọ nke nwere onwe ya site na ọrịa strok.Ime ụlọ ọ bụla nwere akụrụngwa ọkụ.N'elu nke ihe ngbanwe ahụ nwere ngwaọrụ ikuku ikuku na-akpaghị aka iji dozie ọnọdụ okpomọkụ nke ụlọ ihe ntụgharị.
F. Igbe ahụ na-agbanwe na agba ma nwee ike ịhazi ya na gburugburu ebe obibi.
Mara: Akụkụ mmepụta na ịdị arọ bụ data maka oge ụfọdụ ma nwee ike ịgbanwe n'ihi nkwalite imewe.
Nke gara aga: Kasị mma ọnụ ala Voltage Switchgear GCS dị ala voltaji mgbapu ihe na-ebu ihe-shengte MOQ 1pcs
Osote: OEM jikọtara Transformer Eletriki igbe ụdị mgbanwe na Factory Price-shengte